tenga iyo 32gb motorola moto x yakachena edition kubva kuamazon pamutengo mumwecheteyo nemuenzaniso we16gb
Kuru Nhau & Ongororo Tenga iyo 32GB Motorola Moto X Yakachena Edition kubva kuAmazon pamutengo mumwecheteyo ne16GB modhi
Tenga iyo 32GB Motorola Moto X Yakachena Edition kubva kuAmazon pamutengo mumwecheteyo ne16GB modhi
Iyo Motorola Moto X Yakachena Edition yakatangwa munaGunyana wapfuura, uye inoratidzira yakadzikama seti yemafekitori ayo achakabata kumusoro kwemwedzi minomwe gare gare. Nharembozha yakagadzirirwa Gorilla Girazi 3 yakachengetedzwa 5.7-inch LCD skrini, ine 1440 x 2560 QHD resolution. Izvi zvinoshanda kune pixel density ye520ppi. Iyo Snapdragon 808 chipset inotyaira iyo unit, yakatakura hexa-core 1.8GHz CPU ine Adreno 418 GPU. 3GB ye RAM iri mukati pamwe ne16GB / 32GB / 64GB yemukati memory; 128GB inokwana microSD slot inowanikwa kune avo vanotsvaga yekuwedzera yekuchengetedza.
21MP snapper iri kumashure, mutambo wef / 2.0 aperture. Iyo 5MP yekumberi-yakatarisana kamera inobata selfies uye vhidhiyo chats. Iyo 3000mAh bhatiri inochengeta mwenje irambe iripo, uye Android 5.1 inotangirwa-kuiswa. Inonzwika sedare rakanaka kune mumwe munhu anotsvaga ruoko runotengeka runogona kunge rwakapfuura simba rwayo, asi runopa kukosha kwemari.
Iye zvino, Amazon ine chibvumirano chakanaka cheavo vanofarira Moto X Pure Edition. Mutengesi wepamhepo anotengesa iwe iyo 32GB vhezheni yefoni ye $ 349.99. Kwete chete kuti iyo $ 50 dhisikaundi, iyo inokutendera iwe kuti utore iyo 32GB musiyano wetsamba yemutengo weiyo 16GB unit. Ramba uchifunga kuti urikupa mukana wekugadzirisa foni uchishandisa iyo Moto Maker kana iwe ukatora Amazon kuita pachibvumirano ichi.
Foni isina kuvhurwa inoshanda paVerizon, AT & T, T-Mobile uye Sprint. Kutyaira kweTurbo kuchakupa maawa gumi ehupenyu hwebhatiri mushure memaminetsi gumi nemashanu chete ekuchaja, uye IP52 Certification inochengetedza foni kudzivirirwa kana paine kudururwa kana kunaya kwemvura.
Ichi chibvumirano chinowanikwa kwenguva shoma chete. Kana uchifarira, tinya pane sosi yekubatanidza.
Amazon iri kupa iyo 32GB Motorola Moto X Yakachena Edition pamutengo weiyo 16GB modhi
mabviro: Amazon kuburikidza AndroidandMe
moto x yakachena ongororo 2015
pixel 3 chii chiri mubhokisi
Maitiro ekuona uye kudzoreredza yakachengetedzwa, asi yakakanganwa Wi-Fi password pane Android
Mhosva dzakanakisa dzeSamsung Galaxy Cherechedzo 10 uye Cherechedzo 10+: dzivirira rako rinopenya nyowani!
HTC One A9 vs Apple iPhone 6s vs Samsung Galaxy S6: specs kuenzanisa
Iko & apos; yakavanzika yemuno rekodhi rekodhi pane iyo Galaxy S7 / S7 kumucheto, pano & maapuro maitiro ekuishandisa
Portrait Mode yemunhu wese: heano mana maapplication anoteedzera iyo iPhone 7 Plus 'yakasarudzika ficha
Samsung Galaxy S6 kumucheto vs Samsung Galaxy Note 4